Sary kanto : misokatra ny « Art photography Awards » | NewsMada
Sary kanto : misokatra ny « Art photography Awards »
Sambany ! Mikarakara fifaninanana ho an’ny mpakasary ny LensCulture. « Art photography Awards » ny anarany. Araka izany, tsy ny sary rehetra nalaina tetsy sy teroa na koa izay heverina ho toy ny mahazatra no afaka mifaninana fa ireo sary mahafehy ny maha kanto azy. Misokatra ho an’ny rehetra, mahafeno io fepetra io, ny fifaninanana, hatramin’ny 2 jolay izao.
Anisan’ny tombontsoa amin’ny fandraisana anjara amin’ity hetsika iray ity ny fahitan’izao tontolo izao ny sanganasan’ireo mpakasary mendrika indrindra.
Fantatra fa haranty any amin’ny Aperture galerie any New York ny sanganasan’ireo hotsongaina manokana. Hanatrika ny fanokafana izany ireo mpakasary tompon’ny sary, ny mpanao gazety samihafa, ny matihanina amin’ny tontolon’ny sary kanto, sns. Hisy ny fampifandraisana ireo samy mpakasary avy amin’ny firenen-tsamihafa, amin’io fotoana io. Ankoatra ny any an-toerana, alefa amin’ny tranonkalan’ny Aperture ihany koa ny sary sy ny mombamomba ireo mpandresy ary ny sanganasany.
Araka ny voalaza ao amin’ny tranonkalan’ny Lensculture, toeram-pampirantiana malaza sy safidin’ny mpanakanto maro ny Aperture galerie, any New York. Manana gazety boky ihany koa izy ka miompana tanteraka amin’ny tontolon’ny saripika izany. Inoana fa mba hisy mpakasary malagasy handray anjara amin’ny fifaninanana ary, indrindra, anisan’ireo hotsongaina manokana.